अंकिता लोखंडेले पैसाका लागि विवाह गरेकी हुन् ? विक्कीलाई रोज्नुको कारण खुलाइन् – Sandesh Press
January 26, 2022 81
एजेन्सी । अंकिता लोखंडेले बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतको फिल्म मणिकर्णिकाबाट डेब्यु गरेकी हुन् । फिल्ममा उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । तर, त्यसपछि उनी फिल्मबाट गायब भइन् । अंकितालाई फिल्मबाट किन गायब भइन् भनेर सोध्दा उनले भनिन्, ुकिनभने म विवाह गर्दै थिएँ।ु उनले भनिन्, ‘मलाई मेरो अनुसार फिल्म चाहिएको छ, म फिल्म गर्नका लागि मात्र फिल्म गर्न सक्दिनँ । म आफ्नो खालको फिल्म गर्न चाहन्छु र आफ्नो मनपर्ने पात्रहरू खेल्न चाहन्छु ।
विवाहपछि अंकिताको जीवनमा के परिवर्तन भयो ?
अंकिता लोखंडेले गत वर्ष डिसेम्बरमा प्रेमी विक्की जैनसँग विवाह गरेकी थिइन् । विवाहपछिको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्नमा अंकिता लोखंडेले भनिन्, ‘विवाहपछि मेरो जीवनमा केही परिवर्तन भएको छैन । विक्की र म लामो समयदेखि साथी हौं। हामी दुबै जना निकै चिल जोमा बस्छौं । द
वै रमाइरहेका छौ ।
विवाहपछि तीन दिनसम्म पार्टी चल्यो
विक्की जैनको बारेमा अंकिताले लेखेकी छिन्, ‘विक्की त्यो व्यक्ति हो जसले मलाई हरेक परिस्थितिमा साथ दिएको छ । उहाँलाई साथीको रूपमा पाएकोमा म आफूलाई धन्य महसुस गर्छु। म यसलाई हल्का रूपमा लिन्छु भन्ने विश्वास गर्छु जब यो कामको लागि आउँछ र यसले मलाई सधैं काममा धकेल्छ। अंकिता लोखंडेले भनिन्, ‘पार्टी गर्न सकूँ भनेर बिहे गरेकी हुँ । तिमीलाई थाहा छ, विवाहपछि हामीले तीन दिन मात्रै पार्टी गर्यौं ।
अंकिता लोखंडेले पैसा उडाएर बिहे गरिन् ?
अंकिता लोखंडेले भनिन्, ‘हामीले पैसा उडाउन मात्र चाहन्थ्यौँ । मलाई कुनै परिवर्तन भएको छैन जस्तो लाग्दैन। आखिर जनता के चाहन्छन् रु मलाई थाहा छैन। मेरो अनुसार केहि परिवर्तन भएको छैन। वास्तवमा, यो सबै तपाइँ चीजहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ। कतिपय मानिसहरूले यी कुराहरूलाई धेरै गम्भीर रूपमा लिन्छन्। विवाह भनेको जिम्मेवारी पूरा गर्नु होइन तर स्वतन्त्र जीवन बिताउनु हो।
अंकिता लोखण्डे दिवगत अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको पूर्व प्रेमिका हुन् । उनीहरु करिब ८ वर्ष संगै थिए । पवित्र रिस्ता भन्ने टेलिसिरियलमा संगै काम गरेका उनीहरु त्यही बेला नजिकिएका थिए । उनीहरु धेरै वर्ष संगै बसेपनि सुशान्तसंग विवाह हुन सकेन । सुशान्त ठूलो पर्दाको फिल्ममा काम गर्न थालेपछि अंकितासंग दुरी बढ्यो । अंकिताले पनि सुशान्तको खुसीमा कुनै वाधा गरिनन् । सुशान्तलाई स्वतन्त्र छोडिदिइन् । तर दुई वर्ष अघि सुशान्तको निधन भयो ।
Prevश्रीमानले यौ’न प्या’स मे’टा’उँदा श्रीमतीको सं’बेदनशिल अ’ङ्गमा टो’कि’टो’की मा’रे(भिडियो हेर्नुस)
Nextटिकटकमा भाइरल बिनुले प्रेमीसँग कसिन् लगनगाँठो
पललाई पहिलोपटक म्युजिक भिडियोमा खेलाउने गायक पहिलोपल्ट मिडियामा,के भने उनले?(भिडियो)